आज नयाँ वर्षको दिन, कस्तो छ तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् राशिफल ..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज नयाँ वर्षको दिन, कस्तो छ तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् राशिफल ...
आज मिति २०७६ साल वैशाख १ गते । इश्वी सन् २०१९ अप्रिल १४ तारिख । शकसंवत् १९४१ । परिधावी संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । नेपाल संवत् ११३९ चौलाथ्व । चैत्र शुक्लपक्ष। नवमी तिथि आईतबार ।
दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ । परिवर्तित परिस्थितिलाई वुझेर काम गर्न सके उपलब्धि राम्रै हात लाग्नेछ । समस्याको पहिचान गरेर मात्र समाधान खोज्नु होला । कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन । व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ । गीत संगितमा अभिरुची बढ्नेछ । अतिथिको आमन्त्रण हुनेछ ।
दिन प्रतिकुल देखिन्छ । काममा सहजीकरण अझै हुने देखिन्न । अरुको काम गरेर जश कमै पाईनेछ । व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा अनुसारको प्रतिफल मिल्ने छैन । काम गर्दा आत्म विश्वासको कमि हुनेछ । विरोधीको सक्रियताले काममा असर पर्न सक्छ । आफन्तले पराईको व्यवहार गर्ने छन् । झुट्टा आरोप लाग्न सक्छ ।
अलमलमा नपरि अगाडि बढ्नु होला । उपलब्धिको संरक्षण गर्न तिर लाग्नु होला । मुद्धा मामिलामा विजय हात लाग्नेछ । लगनाी अनुसारको व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी हुनेछ । आफन्तजनबाट सहयोग मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । गरेका काम अधिकाँश सफल हुनेछन् ।
काममा सोचे भन्दा धेरै राम्रो हुनेछ । स्वतन्त्र प्रकृतिका व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन हुनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ अवसर आउन सक्छ । भौतिक सम्पतिमा वृद्धि हुनेछ । मनमा सुख,शान्ति मिल्नेछ । साथी भाईको सहयोग पाईनेछ । गीत,संगित तथा कला सहित्यमा अभिरुची बढ्नेछ ।
समयमा विस्तारै सुधार आउनेछ । कार्य लगनशिलता बढ्नेछ । अबरुद्ध कामले विस्तारै गति लिनेछ । स्त्री जातिबाट सहयोग मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । श्रृङ्गारिक तथा सौन्दर्य प्रशोधन जस्ता कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । धार्मिक आस्था र विश्वास बढ्नेछ । कुरा भन्दा काममा जोड दिनुहोला ।
समयमा अझै सुधार आउने देखिन्न जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला । कहि कतैबाट इज्जत प्रतिष्ठामा आच आउने काम हुनसक्छ । राजनीति औजार प्रयोग गरेर तपाईलाई दुःख दिन सक्छन् । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । देखिएका सम्भावना क्षिण भएर जानेछन् । काम गर्र्न स्वास्थ्यले कम साथ दिनेछ ।
सामान्यतया दिन अनुकुल नै देखिन्छ काममा ढिला सुस्ति नगरि अगाडि बढ्नु होला । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखा पर्ने छन् । वैदेशिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ । विपरित लिङ्गिबाट सहयोग मिल्नेछ । मान्य जनको सहयोग मिल्नेछ भने समाजमा तपाईको वौद्धिकताको कदर हुनेछ ।
सवैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिने छैन । हेलचक्र्याई गरेमा उपलब्धि गुमाउनु पर्नेछ । काममा सहयोग गर्ने भन्दा खुट्टो तान्ने बढि हुनेछन् । संघर्षबाट सफलताको शिखर चढ्न पाईनेछ । परिश्रमको अन्तिम परिणाम सुखद रहनेछ । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । ऋण लगानी नगर्नु होला ।
दयाँ मायाँमा कुनै काम हुने छैनन । समस्याबाट नतर्सि अगाडि बढ्नु भयो भने मात्र मिशनमा पुग्न सक्नु हुनेछ । आर्थिक प्रलोभनमा परेर वाह्य व्यक्तिसँग कुनै काम नगर्नु होला । स्पष्ट वोल्दा आफैलाई नोक्सना हुने भएकोले आर्थिक करोवार र वोलिलाई धान्नु पर्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा उतार चढाव आई रहनेछ ।
कामको विचमा विचार परिवर्तन गर्दा उपलब्धि गुमाउनु पर्नेछ । पारिवारिक खर्च बृद्धि हुन सक्छ । काम गर्ने जोश जागर घट्नेछ । तपाईको सहयोगको कुनै मुल्याङ्कन हुने छैन । लगानीमा धेरै जोड नदिनु होला । इच्छा र आकाँक्षा अधुरा रहनेछन् । स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला । घरमा जमघट बढ्नेछ ।
ग्रह,गोचर सामान्य अनुकुल देखिन्छ । सहज रुपमा काम हुनेछन् । आफ्नै पहलमा धेरै कामको टुङ्गो लाग्नेछ । व्यापार व्यवसायमा प्रगतिका सम्भावना प्रशस्त देखिने छन् । अर्थोपार्जन हुनेछ । काममा ढिला सुस्ति नगर्नु होल । राजनीति व्यक्तिको भर परेर कुनै योजना अगाडि नसार्नु होला । आर्थिक कारोवारमा ध्यान दिनुहोला ।
लगनशिलता बढाउनु होला । प्रयत्नबाट नै काम बन्ने छन् । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । अध्ययन कार्यमा भन्दा आर्थिक कार्यमा बढि दखल हुनेछ । कामको विचमा विचार परिवर्तन नगर्नु होला । लगानी भन्दा श्रममा जोड दिनुहोला । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । धन दिदा डुब्न सक्छ ।